စျေးမြင့်နေတဲ့နှုန်းအတိုင်း ဂိုးအပေါ် သွင်းသွားမလား? |
စနေညက 8ပွဲကစားသွားခဲ့ပြီး sunday ညမှာတော့ လိဒ် – လီဗာပူး ပွဲစဥ်တစ်ပွဲပဲ ကစားဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ လိဒ်က မနှစ်ကအတိုင်း တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားပုံစံ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး ခံစစ်ကလည်း ပေါက်ထွက်နေတုန်းပါ။
3ပွဲကစားထားပြီး 2ပွဲသရေ 1ပွဲရှုံးနဲ့ နိုင်ပွဲမရသေးဘူး။ တိုက်စစ်က 4ဂိုးရထားပေမယ့် ခံစစ်က 8ဂိုးပြန်ပေးထားရတော့ ပေးဂိုးက တစ်ဆပိုများနေတယ်။
လီဗာပူးဖက်ကကြည့်ရင် မနှစ်ကလို မဟုတ်ဘဲ ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေ အားလုံးနီးပါး ပြန်စုံနေတယ်။
အဓိက တိုက်စစ်မှုးတွေဖြစ်တဲ့ မာနေး၊ ဆာလက်၊ ဂျိုတာ၊ ဖာမီနိုတို့အားလုံးအပြင် ဗန်ဒိုက်စ်၊ အာနိုးလ်တို့လည်း ရှိနေတဲ့အတွက် စိတ်ချရပါတယ်။
3ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ 6ဂိုးရထားတော့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ 2ဂိုးနှုန်း ဆိုတော့ မဆိုးဘူး။
ခံစစ်က 1ဂိုးပဲ ပေးထားရတော့ တောင့်တင်ပါတယ်။
ဘွတ်ကီတွေက ဒီပွဲမှာ လီဗာပူး (1+50/3-30) စျေးဖွင့်ထားတာကိုကြည့်ရင် 2သင်းစလုံး ဂိုးရနိုင်ခြေကို တွက်ထားပုံပါပဲ။
လီဗာပူးခံစစ်တောင့်ပေမယ့် ဒီဂိုးပေါင်းစျေးအရဆိုရင်တော့ ပြင်းတဲ့ အနေအထားလို့ တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်အနေအထားနဲ့ ဂိုးပေါင်းစျေး မြင့်နေတဲ့အတွက် အပေါ်စုံမှာ ဂိုးအပေါ်ကို တစ်ဆလောက်ပိုတင်ထားချင်တယ်။
ေစ်းျမင့္ေနတဲ့ႏႈန္းအတိုင္း ဂိုးအေပၚ သြင္းသြားမလား?
စေနညက 8ပြဲကစားသြားခဲ့ၿပီး sunday ညမွာေတာ့ လိဒ္ – လီဗာပူး ပြဲစဥ္တစ္ပြဲပဲ ကစားဖို႔ရွိပါတယ္။
ဒီရာသီမွာ လိဒ္က မႏွစ္ကအတိုင္း တိုက္စစ္ဖြင့္ကစားပုံစံ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခံစစ္ကလည္း ေပါက္ထြက္ေနတုန္းပါ။ 3ပြဲကစားထားၿပီး 2ပြဲသေရ 1ပြဲရႈံးနဲ႔ ႏိုင္ပြဲမရေသးဘူး။ တိုက္စစ္က 4ဂိုးရထားေပမယ့္ ခံစစ္က 8ဂိုးျပန္ေပးထားရေတာ့ ေပးဂိုးက တစ္ဆပိုမ်ားေနတယ္။
လီဗာပူးဖက္ကၾကည့္ရင္ မႏွစ္ကလို မဟုတ္ဘဲ ဒဏ္ရာရကစားသမားေတြ အားလုံးနီးပါး ျပန္စုံေနတယ္။ အဓိက တိုက္စစ္မႈးေတြျဖစ္တဲ့ မာေနး၊ ဆာလက္၊ ဂ်ိဳတာ၊ ဖာမီႏိုတို႔အားလုံးအျပင္ ဗန္ဒိုက္စ္၊ အာႏိုးလ္တို႔လည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ 3ပြဲကစားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 6ဂိုးရထားေတာ့ တစ္ပြဲပ်မ္းမွ် 2ဂိုးႏႈန္း ဆိုေတာ့ မဆိုးဘူး။ ခံစစ္က 1ဂိုးပဲ ေပးထားရေတာ့ ေတာင့္တင္းပါတယ္။
ဘြတ္ကီေတြက ဒီပြဲမွာ လီဗာပူး (1+50/3-30) ေစ်းဖြင့္ထားတာကိုၾကည့္ရင္ 2သင္းစလုံး ဂိုးရႏိုင္ေျခကို တြက္ထားပုံပါပဲ။ လီဗာပူးခံစစ္ေတာင့္ေပမယ့္ ဒီဂိုးေပါင္းေစ်းအရဆိုရင္ေတာ့ ျပင္းတဲ့ အေနအထားလို႔ တြက္ဆႏိုင္ပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္အေနအထားနဲ႔ ဂိုးေပါင္းေစ်း ျမင့္ေနတဲ့အတြက္ အေပၚစုံမွာ ဂိုးအေပၚကို တစ္ဆေလာက္ပိုတင္ထားခ်င္တယ္။